Jilaa ay Soomaalida aad u daawadaan aflaantiisa oo siyaasi isku badalay -
Jilaaga caanka ah ee Shirkadda filimada Bollywood, Sunny Deol ayaa talaadadii ku biiray xisbiga Bharatiya Janata Party (BJP) ee uu hogaamiyo raisul wasaaraha India Narendra Modi.
Jilaagan siyaasiga isku baddalay oo kasoo jeeda magaalada Gurdaspur, oo ka tirsan gobolka Punjab ayaa u tartami doona inuu xisbiga musharrax ugu noqdo xilka kursiga baarlamaanka, waxaana booskaas kula loollamaya Kirron kher oo kasoo jeeda Chandigarh.
Jilaaga ayaa tallaabo u qaaday inuu kasoo jeesto xisbiga talada haya, isagoo raacaya raadkii aabihiis Dharmendra oo kursiga baarlamaanka u matalayay magaalada Bikaner ee gobolka Lok Sabha, intii u dhaxeysay sannadihii 2004-tii ilaa 2009-kii.
“Sida uu aabahay Dharmendra ula saftay Vajpayee ayaan aniguna ula safanayaa Modi”, ayuu yiri mar uu ka hadlayay sababta uu u qaatay go’aanka ku saabsan inuu siyaasadda ku biiro.
“Wax badan ayuu Modi u qabtay dalka wuuna na sii hormarin karaa. Waddanku wuxuu u baahan yahay hoggaamiye isagoo kale ah” ayuu yiri Mr. Deol.
Wasiirka gaashaandhigga, Nirmala Sitharaman, oo jilaagan ku soo dhaweynayay siyaasadda ayaa yiri: “Waan ku faraxsanahay inaan xisbiga BJP kusoo dhaweeyo jilaagan caanka ah, howlkarka ah, geesiga ah, isagoo da’ yarna xirfaddiisa ay heer sare ahayd”.
6 Dead, Including 4 Residents, After Al-Shabaab Raid In Kenya